स्वास्थ्य मापदण्डको उल्लंघन : मन्त्रीकी छोरीको विवाहमा हजारौं पाहुना - Naya Pageस्वास्थ्य मापदण्डको उल्लंघन : मन्त्रीकी छोरीको विवाहमा हजारौं पाहुना - Naya Page
जनकपुर । कोरोना संक्रमण रोक्न सरकारले २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन निषेध गरेको छ । तर, मधेस प्रदेशका एक मन्त्रीले छोरीको विवाहमा हजारौंलाई भेला गरेर भोज नै खुवाएका छन् । सरकारकै स्वास्थ्य मापदण्डको उल्लंघन गरे ।
आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले छोरी मेघाको विवाह बिहीबार रौतहट निवासी रोमन साहसँग गरिदिएका हुन् । उक्त विवाहमा कुनै स्वास्थ्य मापदण्ड कायम थिएन । पाँच हजारभन्दा बढीलाई भेला गरेर भोजसहितको विवाह मन्त्री साहले आयोजना गरे ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीले पनि गत माघ २ गते सूचना जारी गर्दै बैठक, सभा समारोहमा रोक लगाएको थियो । तर, विवाहको स्वयंवरमा मधेस प्रदेशका प्रमुख हरिशंकर मिश्र पनि उपस्थित भए । स्वयंवरपछिको भोजमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत सहभागी भए ।
सभामुख सरोजकुमार यादव, अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद यादव र भौतिक पूर्वधारमन्त्री रामसरोज यादव पनि त्यहाँ थिए । खचाखच भीडमा पुगेर संघीय सरकारका पूर्वमन्त्री मातृका यादव र रामेश्वर राय यादवले प्रशासनले जारी गरेको सूचनाको बर्खिलाप गरे । प्रदेशस्थित नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीका प्रमुखहरू पनि नियम उल्लंघनको साक्षी बने ।
बिहीबार साँझ बर्दिबासस्थित एक पार्टी प्यासेलमा उक्त वैवाहिक कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो । त्योभन्दा दुई दिनअघि महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका-६ फुलकाँहास्थित पुख्र्यौली गाउँमा कम्तीमा २० क्विन्टल चामलको भोज थियो । मन्त्री साहले भोज खुवाउन वडा कार्यालय र स्वास्थ्य कार्यालयको प्रांगणसमेत प्रयोग गरेका थिए ।
मधेस प्रदेश भारतीय सीमासँग जोडिएको छ । भारतमा कोरोनाको संक्रमण बढ्दो छ । प्रशासनले मधेसका जिल्ला उच्च जोखिममा छन् । कोरोनाको मापदण्डलाई कडापूर्वक लागू गर्न प्रशासनले निर्देशन दिएको हो । तर, त्यो कानुन प्रदेश सरकारकै उच्च पदस्थले मुठ्ठीमा लिएका छन् ।
स्वास्थ्य निर्देशनालयका प्रमुख विजयकुमार झा भन्छन्, ‘अनियन्त्रित भीडले कोरोना फैलिन मद्दत गरेको छ । ५० प्रतिशतले अझै मास्क लगाउँछन्, खोप लगाउन मान्दैनन् । कोरोना केही होइन भनेर खेलाँची गर्छन् ।’ मार्गदर्शन दिने तहबाट कोरोना महामारी नियन्त्रणको मापदण्ड उल्लघंन हुनु दुःखद् रहेको महोत्तरीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपेन्द्र न्यौपानेले बताए । ‘उहाँहरूले नै मापदण्ड लागू गर्न निर्देशन दिनुहुन्छ । उहाँहरू नै मान्नुहुन्न । ओखती कसलाई ? बिरामीलाई भने जस्तो भयो’, उनले भने, ‘कानुनअनुसार वडा कार्यालय र स्वास्थ्यचौकी बन्द गरेर भोज खुवाउन पाइँदैन ।’
महामारीका बेला निर्धारित मापदण्ड अटेर गरेमा रोग संक्रमण ऐन २०२० बमोजिम कडा कारबाही हुने उल्लेख छ । मन्त्रीले नै ऐन हातमा लिएर खुलेआम चुनौती दिँदा पनि सरोकारवाला निकाय मौन छन् । ‘मन्त्री ज्यूले जसरी पनि आउनू भनेर निमन्त्रणा पत्र पठाउनु भयो । फोन गर्नुभयो । नजाने कुरो भएन’ सभामुख सरोजकुमार यादव भन्छन् ।
उनले २५ जनाभन्दा बढी भेला हुनु हुँदैन भने थाहा नभएको बताउँदै कार्यालयमा यस्तो नियमबारे पत्र पनि नआएको बताए । उनी भन्छन्, ‘नेताहरूले नै कानुन बनाउँछन्, अनि उल्लंघन गर्छन्। म कानुन पालना गराउने मान्छे हुँ । कानुन मिच्दै प्रदेश प्रमुख ज्यू, मुख्यमन्त्री ज्यू, मन्त्री ज्यू र प्रहरी प्रमुखहरू पनि जानुभयो ।’
मन्त्री साहले सतर्कता अपनाएर वैवाहिक कार्यक्रम आयोजना गरेको दाबी गरे । उनले भने, ‘मास्क, सेनिटाइजर, साबुनपानीको व्यवस्था गरिएको थियो ।’ हजारौंलाई भेला गरेर कोरोना नियन्त्रणको मापदण्ड मिच्नु भयो नि ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘२५ जना नै थियौं । पाहुनाहरू आउने जाने क्रम चलिरह्यो ।’ वडा कार्यालय र स्वास्थ्य कार्यालयको प्रांगण प्रतीक्षालय बनाइएको उनको भनाइ छ । त्यो गाउँको पनि दलान भएकाले भोज खुवाएको उनले बताए । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट